Yangon – discoverinmyanmar
Yangon means (End of Strife’), formerly known as Rangoon, is the capital of the Yangon Region and the largest city of Myanmar (also known as Burma). Yangon served as the capital of Myanmar until 2006. With over7million people,…
Art and Culture, Boat, Cycling, Pagoda, Sight Seeing, Yachting Tour
Trip Code :WT-CODE 3589
Yangon means (End of Strife’), formerly known as Rangoon, is the capital of the Yangon Region and the largest city of Myanmar (also known as Burma). Yangon served as the capital of Myanmar until 2006. With over7million people, Yangon is Myanmar’s most populous city and its most important commercial center.
The name Yangon is derived from the combination of the Burmese words yan and koun which mean ‘enemies’ and ‘run out of’, respectively. This word combination is commonly translated as ‘End of Strife’.
ရန်ကုန်မြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခင်က မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၏ မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ မှ စတင်၍ စစ်အစိုးရသည် နေပြည်တော်ကို မြို့တော်ဟု တရားဝင် နေရာပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း၊ လူဦးရေ ၇ သန်းကျော်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အကြီးမားဆုံး မြို့တော်နှင့် အရေးအကြီးဆုံးသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အချက်အချာအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေသည်။ယနေ့ခေတ်တွင် ရန်ကုန်မြို့သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကိုလိုနီခေတ်မှ အဆောက်အအုံ အများဆုံး ကျန်ရှိသည့်မြို့ ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ရန်ကုန်၏ မူလအမည်မှာ ဒဂုံ ဖြစ်သည်။ ရန်တွေကုန်စင်သော အဓိပ္ပါယ်နှင့်အလောင်းမင်းတရားက ရန်ကုန်ဟု အမည်ပြောင်းလိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ဟာအပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတုအတွင်း တည်ရှိသည်။ မြို့တော်တွင် မိုးရာသီကာလသည် ရှည်ကြာလေ့ရှိပြီး မေလမှ အောက်တိုဘာလအထိရှိတက်ကာ မိုးရေအများအပြား ရရှိသည်။ နိုဝင်ဘာလမှ ဧပြီလတိုင်အောင် ခြောက်သွေ့သောရာသီပင် မိုးဖွဲ့များ ကျတက်သေးသည်။
Chauk Htat Gyi Pagoda \_
Naga Cave Pagoda
Kyaik Khouk Pagoda
Hlaw Gar Garden Wildlife Park
People’s Square & Park
Sule City Hall
National Races Villages
Minister’s Building Secretariat
Lotte Hotels Serviced & Apartments
Mother’s Home Motel
The Lodge Hotel Yangon
Shwe Pan Sai Hot Pot
Gang Nam Buffet
Sarabol Korea Restaurant
Mahattan Fish Market Restaurant
Khai Li Chicken Sour & Spicy
Wa Toke Gyi BBQ & Hot Pot Buffet
Pan Swal Taw Restaurant
L’opera Itilain Restaurant & Bar
Shwe Taung Tan Kyay Ohh
Shoda Sushi House
Ramen Monster Japanese Restaurant
Danu Phyu Daw Saw Yee Myanmar Food Restaurant
Khine Khine Kyaw Myanmar Food Restaurant
Hello Japanese Restaurant
Sate Kyike Sea Foods
Mr. Htone Chai
Chilly Pot Hot Pot & Marla Xiao Gaw Restaurant
Be the first to review “Yangon” Cancel reply